XOH HOOSE: Xukuumada Somaliya oo Xayiraad dhanka Safaradaha ku soo rogtay qaar kamid ah. – Kismaayo24 News Agency
XOH HOOSE: Xukuumada Somaliya oo Xayiraad dhanka Safaradaha ku soo rogtay qaar kamid ah.
by admin 6th October 2019 059
Xog ay heshaywarbaahinta Xogwaran ayaa sheegeysa in ay qorsheyshay Xukuumadda Soomaaliya in cunaqabateyn xagga safarka ah lagu soo rogo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo madaxda dawlad gobaleedyada qaarkood loo diidi doono in ay dalka Soomaaliya ka baxaan.
Xogta ayaa sheegaysa in go`aankan ay gaareen Madaxda ugu sareysa dawladdu saacadihii u dambeeyey, markii ay diyaarad katimid dalka Kenya si toos ah uga dagtay magaalada Kismaayo, iyadoon wax amar ah ka haysan Xukuumadda Soomaaliya.
Warku wuxuu cadeynayaa in xayiraaddan xagga safarka ah ay soo saari doonaan laamaha Ammaanka Qaranka, iyagoo sabab uga dhigaya in madaxdii hore ammaankooda awgood looga baajinayo safaro siyaasadeed oo ay ku tagi lahaayen dawlad gobaleedyada qaarkood.
Xogta aan helnay oo ah mid xasaasi ah, waxay kaloo sheegaysaa in dhaqdhaqaaqyada siyaasiin, xildhibaano iyo madaxda dawlad gobaleedyada qaarkood laga joojiyey in ay ka baxaan Soomaaliya.
Qaar kamid ah xubnaha la xanibay ayaa maalmo kahor lagala laabtay Baasaboorka Diblumaasiga ee Soomaaliya, iyadoo ay ku xayiran yihiin magaalada Muqdisho oo aysan ka bixi karin, taas oo ku wajahan walaaca labada dhinac.
Xayiraada cusub ee lagu soo rogay Madaxdii hore haddii ay dhaqan-gasho oo la geeyo madaarka magaalada Muqdisho ee Aden Cadde, waxay ka dhigan tahay in ay Xukuumaddu qaaday talaabo kale oo go`aankeedu halis-yahay balse ay u bareertay, waxaana soo baxaya warar sheegaya in ay Shariif Sheekh Axmed iyo Xassan Sheekh u socdaali doonaan Puntland ama Kenya si ay u tagaan Kismaayo.
DIGNIIN: C/naasir Seeraar oo u digay Madaxda iyo Siyaasiyiinta u sii qulquleysa Magaalada.
DEG DEG: Mudane ka Tirsan Baarlamanka Federaalka oo Caawa Hooygiisa Weerar lagu qaaday iyo qasaaraha ka dhashay oo la sheegay in…
Akhriso: Madaxda Maamul Goboleedyada oo Xiriirkii Wada shaqeyn u jaray Dowladda Federaalka
Xafiisyo ay ku shaqeeyaan Qaar Kamid ah Guddiyada Baarlamaanka oo Maanta lagu wareejiyay